Ingabe kunzima ukuthola inkampani ye-search engine yokuthuthukisa injini?
Yebo, ngezinye izikhathi ukufuna inkampani enokwethenjelwa yenkampani yokucinga injini engaba yinkampani ingaba ngumsebenzi omkhulu kakhulu. Kunezinhlinzeko eziningi kakhulu zezinsiza zokusesha zokutholakala ezitholakalayo emakethe - kusukela kubahlinzeki be-SEO abavamile, okuhlangenwe nakho okuningi futhi ngokuvamile ebiza kakhulu ejensi yokukhangisa yedijithali ebiza kakhulu. Kodwa ungayithola kanjani ukuthi yini ezoba efanelekile ngokufaneleyo ebhizinisini lakho le-intanethi? Indlela elula kakhulu kodwa namanje engcono kakhulu yokuthola inkampani yocwaningo lokusebenza injini yokusesha nje nje ukuhlola imiphumela yayo yangempela. Ukuhlola ubuchwepheshe obudlule namagugu wangempela kungasiza ukuqonda, okungenani, ukuthi uzokwenzani. Ngokusobala, uma inkampani ingakutshela ngokucacile ukuthi yimiphi impumelelo eyenziwe ngamaphrojekthi athile afana nawe, cishe cishe ucabangela ukhetho olungcono lokukhetha.
Uma kufanele kwenzeke ukuthi isipho sokuqala sizwakale sihle kakhulu, ungalokothi ugijimise ukukuthatha iqiniso. Ngaphezu kwalokho, uma unesivumelwano esivumayo esisekelwa yiziphi iziqinisekiso - ungcono ukushiya ingxoxo enjalo ngesaziso esifushane. Ngokuvamile, noma yimiphi imiphumela eqinisekisiwe ivame ukunikezwa okungenani ngabahlinzeki be-SEO abaphansi. Ungasho ukuthi izwe kwiWebhu ligcwele izigcawu ezingenangqondo, ezingathembeki noma ze-scammy nje ezenza sengathi zingokoqobo.
Okudingayo uzizwe uqinisekiswe ukuthi kukhona ukuhlolwa kwamacala noma amaphrojekthi okuphumelela esampula. Futhi zonke izinkampani zephrofayli yokwenza injini yokusesha ngeke zize zize zimelele ukuzimela ngokuziqhenya ukukhuluma ngephothifoliyo ephakeme ngezemfundo zabo eziphakeme kanye nokuhlangenwe nakho okuhlangene. Zizwa ukhululekile ukucela amacala afana ncamashi embonini yakho noma ngaphakathi kwe-niche yemakethe efanayo - futhi uzokwazi ukubona ukuthi ubani obani.
Futhi lapha kuza isixwayiso, njengoba kufanele ukhumbule ukuthi noma yiziphi izikhundla ezithathwe ngokwehlukana azibonakali neze isimo sangempela sezindaba. Okudingayo ukwenza isinqumo sokugcina enkampanini yezobuchwepheshe benjini yokucinga kuyisici nje sezibalo ezithile zangempela emgwaqweni. Ukwenza kanjalo, khumbula ukuthi idatha ye-traffic engenalutho ayenzi nhlobo futhi-ayikho isiqinisekiso sokuthi ekugcineni saguqulwa ekuthengisweni kwangempela emva kwakho konke. Ngaleyo ndlela, kufanele uqhube phambili uphinde uhlole ubufakazi obuqondile kubantu abajabulayo abajabulela inkonzo. Ngakho-ke, inkampani yokwenza injini yokusesha injini kufanele ihlale ikulungele futhi ikulungele ukusiza ukuhlangabezana nanoma yimuphi amaklayenti wangaphambili ngenzuzo yangempela.
Uma konke kubonakala kunkulu, kungani ungakhokhisi kulabo bantu? Vele ukwamukela isipho, futhi ubone ukuthi kwenzekani phakathi nomhlangano wokuqala. Ingxoxo ngaphandle komnyango wabo wokuthengisa. Khuluma kuphela neqembu elizosebenza kuphrojekthi yakho. Futhi akeke banqobe isivumelwano nawe ngamaqiniso abandayo namanani. Futhi ungangabazi ukubona yonke imikhakha yobuchwepheshe obutholakala, kusukela kokuqukethwe nomnyango we-SEO ku-Social Media. Ngaleyo ndlela, ekudaluleni ububanzi obubanzi be-SEO isinyathelo ngesinyathelo, uzokwazi ekugcineni unqume, kungakhathaliseki ukuthi ubhekene nenkampani yezinkampani zokusesha injini, noma akukho lutho kuwo Source .